Ch 15 Luke – 2azụ
Home / Bible / Oziọma Luk / Ch 15 Luke
15:1 Ugbu a ọnaụtụ na ndị mmehie na-eru nso ya, ka ha wee gee ya ntị.
15:2 Na ndị Farisii na ndị odeakwụkwọ tamuru ntamu, si, "Onye nke a na-anabata ndị mmehie, eri na ha."
15:3 Ọ gwara ilu a ha, si:
15:4 "Gịnị nwoke n'etiti unu, onye nwere ọgu aturu, na ọ bụrụ na ọ ga-enwekwaghị otu n'ime ha, agaghị ahapụ iri itoolu na itoolu n'ala ịkpa na-aga mgbe ọ bụ onye ọ na-enwekwaghị, ruo mgbe ọ chọtara ya?
15:5 Mgbe ọ hụrụ na ọ dị, ọ nsị ya n'ubu ya, na-aṅụrị ọṅụ.
15:6 Na-alọta, ọ na-akpọ ọnụ ndị enyi ya na ndị agbata obi, sị ha: 'Kelee m mgbe m! N'ihi na m na achọtawo m atụrụ, nke nwere a furu efu. '
15:7 M asị unu, na a ga-nke ukwuu ọṅụ dị ukwuu n'eluigwe n'ihi otu onye mmehie chegharia, karịa n'ihi iri itoolu na itoolu dị nnọọ, ndị na-adịghị mkpa ichegharị.
15:8 Ma ọ bụ ihe nwaanyị, enwe iri mkpụrụ ego drakma, ma ọ bụrụ na ọ ga-enwekwaghị otu mkpụrụ ego drakma, agaghị oriọna, ma ekpochapụ ụlọ ahụ, na ịdị uchu na chọọ ruo mgbe ọ chọtara ya?
15:9 Mgbe ọ hụrụ na ọ dị, ọ na-akpọ ọnụ enyi ya na ndị agbata obi, si: 'Soronụ m ṅụrịa ọṅụ! N'ihi na achọtawo m mkpụrụ ego drakma, nke m na-enwekwaghị. '
15:10 N'ihi ya, m asị unu, a ga-enwe ọṅụ n'ihu ndị mmụọ ozi Chineke n'isi ọbụna otu onye mmehie nke chegharịrịnụ bụ. "
15:11 O wee sị: "Otu nwoke nwere ụmụ nwoke abụọ.
15:12 Na ndị na-eto n'ime ha we si nna, 'Nna, nye m òkè nke gị ala na ụlọ nke na-aga m. 'O we kewa ala na ụlọ dị n'etiti ha.
15:13 Na mgbe ụbọchị ole na ole, ndị na-eto nwa, chịkọtaworo ya niile ọnụ, nke gbara na a ogologo njem dị anya region. na e, ọ agamevu ya umi, bi na okomoko.
15:14 Na mgbe ọ gwusia ya niile, oké ụnwụ dara n'ala ahu, nọ, o wee malite ịdị ná mkpa aka.
15:15 O wee na mmasị na ya otu n'ime ụmụ amaala nke na mpaghara. O zitere ya ka o ugbo, iji na-eri nri ezì.
15:16 Na ọ chọrọ jupụta ya n'afọ na iberibe nri na ìgwè ézì rie. Ma ọ dịghị onye ga-ewerekwa ya nye ya.
15:17 Na-alọta anya doo ya, o kwuru, sị: 'Olee otú ọtụtụ ndị goro aka na ụlọ nna m dị ọtụtụ nri, mgbe m n'iyi ebe a na ụnwụ!
15:18 M ga-ebili ma na-aga nna m, m ga-asịkwa ya: Nna, Emehiewo m megide elu-igwe na n'iru unu.
15:19 M eru ka a kpọọ ya nwa gị. Mee m ka m otu n'ime gị goro aka. '
15:20 Na ebili, ọ gara nna. Ma mgbe ọ ka n'ebe dị anya,, nna ya hụrụ ya, na a kpaliri na ọmịiko, na-agba ọsọ ya, o we dakwasi ya n'olu wee susuo ya ọnụ.
15:21 Na nwa we si ya: 'Nna, Emehiewo m megide elu-igwe na n'iru unu. Ugbu a m eru ka a kpọọ ya nwa gị.
15:22 Ma nna ya sịrị ndị ohu ya,: 'Ngwa ngwa! Ewetara ndị kacha mma uwe-nwuda, na-eyiwe ya ọ. Na-etinye a mgbanaka ya aka na akpụkpọ ụkwụ na ụkwụ ya.
15:23 Na-eme ka ndị fatted nwa ehi ebe a, na-egbu ya. Na ka anyị rie ma jide a oriri.
15:24 N'ihi na nke a nwa m anwụọla, ma gbakee; enye ama osop, na-achọta. 'Ha wee malite eri.
15:25 Ma ya okenye nwa nọ n'ubi. Ọ bịaghachikwara rue nso ulo, ọ nụrụ egwú na ịgba egwú.
15:26 Ọ kpọọ otu n'ime ndị na-ejere, na ọ jụrụ ya ajụjụ banyere ihe ndị a pụtara.
15:27 O wee sị ya: 'Nwanne gị nwoke laghachiri, na nna gị gburu ndị fatted nwa ehi, n'ihi na ọ natara ya n'enweghị nsogbu. '
15:28 Mgbe ahụ wee wee iwe, na ọ dịghị njikere ịbanye. Ya mere, nna ya, -aga, malitere rịọ ya.
15:29 Na na nzaghachi, Ọ si nna-ya: Le, M na-eje ozi gị maka ọtụtụ afọ. M mgbe mebie iwu gị nyere n'iwu. Ma, ị dịghị mgbe m nyere m ọbụna a nwa ewu, ka m wee rie ya na ndị enyi m.
15:30 Ma mgbe a nwa gị laghachi, onye eripịawo ya umi na rụrụ inyom, i gburu ndị fatted nwa ehi maka ya. '
15:31 Ma ọ sịrị ya: 'Nwa, mụ na gị nọ mgbe niile, na ihe nile m nwere bụ nke gị.
15:32 Ma ọ ghaghị eri na-aṅụrị ọṅụ. N'ihi na nke a na nwanne gị nke bụ nwụrụ anwụ, ma gbakee; enye ama osop, na-achọta. ' "